အများပြည်သူသိကြသော Genybet သည်မြက်ခင်းပြင်အားကစားနှစ်ဆယ်ကိုမပံ့ပိုးမီသင်လောင်းကစား လုပ်၍ နေထိုင်ခွင့်ပြုသည့်မြက်ခင်းပြင်၌လည်းရှိသည်။. ခရီးသည်များကိုဆွဲဆောင်ရန်, ထံမှကြိုဆိုဆုကြေးငွေ site ကိုကမ်းလှမ်း 50 €အားကစားမှအသိအမှတ်ပြုခဲ့သည်, အရာအပြင်၌တည်ရှိ၏ 200 €မြက်ပေါ်ကမ်းလှမ်းခဲ့သည် (အသေးစိတ်ကိုဤနေရာတွင်ကြည့်ပါ). စုစုပေါင်း, အသစ်သောမှတ်ပုံတင်ထား€အထိလက်ခံရရှိလိမ့်မည် 250 အလောင်းအစားများ.
အပိုဆုကြေးသည် 50 အကယ်၍ ရှုံးနိမ့်ပါကပထမဆုံးအားကစားဆိုင်ရာလောင်းကစားခြင်းငွေပြန်ရခြင်း. မင်းကိုအသိအမှတ်ပြုလိမ့်မယ် 24 သင်၏အလောင်းအစားများကိုငှားရမ်းသည့်အခါတရားဝင်အတည်ပြုချက်ကိုသင်လုပ်လျှင်နာရီ. မဟုတ်ရင်, သင်လက်ခံလိမ့်မည် 10 €, ထို့နောက်ကြွင်းသောအရာ (40 € max) သင်သည်သင်၏အကောင့်ကိုသက်ဝင်တခါ, အီးမေးလ်ဖောက်သည်ဝန်ဆောင်မှုဖြင့်ပေးပို့သောလျှို့ဝှက်ကုဒ်မတိုင်မီ.
အကျဉ်းချုပ်တင်ဆက်မှုအားကစားဂျီနီဗာဂျီနီဗာ GENYBET GENYBET သည် GENYBET BONUS BONUS SPORT SPORT အားဖျက်သိမ်းခြင်း GENYBET GENYBET တွင်ထားရန်
Genybet တွင်မှတ်ပုံတင်ရန်နှင့်လိုအပ်သောစာရွက်စာတမ်းများကိုဖောက်သည်ဝန်ဆောင်မှုသို့ပေးပို့ရန်. ထို့နောက်စာတိုက်မှလက်ခံရရှိသည့် PIN နံပါတ်နှင့်သင်၏ဂိမ်းခရက်ဒစ်ကိုထည့်ပါ. နောက်ဆုံးတော့, သင်၏ရွေးချယ်မှု၏ခန့်မှန်းအားကစားအဖြစ်အပျက်ကိုသတ်မှတ်ပါ. သူရှုံးမယ်ဆိုရင်, သင်သည် Genybet ကိုအလုပ်ရှင်ကန့်သတ်ချက်သို့ပေးသည် 50. ရရှိသောအလှူငွေများသည်သင် https ပြန်ဖွင့်မည့်အားကစားအလောင်းအစားတစ်ခုဖြစ်သည်://sport.genybet.fr/.
အဖြစ်မကြာမီသင် site ပေါ်တွင်ဖြစ်ကြသည်အဖြစ်, အွန်လိုင်းလောင်းကစားမှတ်ပုံတင်ခြင်းပလက်ဖောင်း၏ကမ်းလှမ်းမှု. ပုံစံကိုဖြည့်စွက်။ သင်၏တကယ့်အချက်အလက်များကိုဖြည့်စွက်ပါ. အမှန်စင်စစ်, သင်မှားယွင်းသောသတင်းအချက်အလက်ရိုက်ထည့်လျှင်, သင့်ရဲ့ဝိသေသလက္ခဏာအပါအဝင်, နောက်မှမှတ်ပုံတင်ရန်အခက်အခဲရှိနိုင်သည်.
ဤအချက်အလက်များထဲတွင်, သင်သည်သင်၏ဘဏ်အသေးစိတ်ကိုရိုက်ထည့်ရမည်. အွန်လိုင်းလောင်းကစားဆိုဒ်များကဲ့သို့, ငွေလွှဲခြင်းကိုဘဏ်ငွေလွှဲခြင်းဖြင့်ပြုလုပ်လိမ့်မည်. ထုံးစံနှင့်ကိုယ်ရေးကိုယ်တာဆိုင်ရာ login အချက်အလက်ကိုလည်းလိုအပ်သည်. ပုံစံပြီးတာနဲ့ပြီးတာနဲ့, "Next Step" ကိုနှိပ်ပါ.
ဒါမရှိရင်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒါကအရေးကြီးတယ်, သင် site မှကမ်းလှမ်းခဲ့သည်အမျိုးမျိုးသောဆုကြေးငွေမှအကျိုးလိမ့်မည်မဟုတ်ပေ. သင်၏အကောင့်ကိုအတည်ပြုရန်, သင်ရုံသင်၏ထောက်ခံစာရွက်စာတမ်းများကိုသာပေးပို့ဖို့လိုအပ်ပါတယ်, ဖော်ထုတ်ခြင်းနှင့်ဘဏ်အသေးစိတ်အပါအဝင်. ထို့အပြင်, အဲဒီအချိန်မှာ, သင်သည်အခြားဆွဲဆောင်မှုရှိသောကမ်းလှမ်းမှုများကိုရယူရန်ပရိုမိုးရှင်းကုဒ်ကိုရိုက်ထည့်နိုင်ပါလိမ့်မည်.
သင်၏အကောင့်ဖန်တီးပြီးသည်နှင့်, သငျသညျသိုက်ကန့်သတ်ထက်ကျော်လွန်လိမ့်မည်သတ်မှတ်ထားရမည်ဖြစ်သည်. အလွဲသုံးစားပြုခြင်းအတွက်လောင်းကစားခြင်းတွင်ကစားသမားကိုရှောင်ရှားရန်ဤကြိုတင်ကာကွယ်မှုများပြုလုပ်သည်.
ကြိုဆိုပါတယ်ဆုကြေးငွေ Genybet.fr: သူတို့ဘယ်လောက်များလဲ?
Genybet.fr မှာ, ဆိုက်တွင်သင်၏မှတ်ပုံတင်ခြင်းပြီးဆုံးပြီးနောက်သင်သည်အပိုဆုကြေးအမျိုးအစားနှစ်မျိုးကိုသင်ရရှိနိုင်သည်. ပထမနှင့်ဒုတိယမြင်းပြိုင်ပွဲ, အားကစားလောင်းကစား.
မြင်းပြိုင်ပွဲတွင်ငွေပြန်အမ်းပါကသင့်အားအပိုဆုကြေးပေးရန်ဖြစ်သည် 50%, အထိပမာဏ 200 ယူရို. ဥပမာအားဖြင့်, သင်သည်သင်၏အကောင့်ခရက်ဒစ်လျှင် 100 ယူရို, တစ်ချိန်က Genybet.fr ဖြစ်စဉ်များ 50% ကျူးလွန်ငွေပမာဏ၏, ဘယ်မှာလဲ 50 ယူရို, အပိုဆောင်းဆုကြေး.
ပရီမီယံကိုအဆင့်နှစ်ဆင့်ကောက်ယူကြောင်းသတိပြုပါ. ပထမ 25% သိုက်လုပ်ထားပြီး, သင်၏အကောင့်ကိုအတည်ပြုပြီးသည့်နောက်ဒုတိယတစ်ဝက်.
အားကစားလောင်းကစားနှင့်ပတ်သက်။, Genybet အသင်းဝင်သစ်များအားအသင်း ၀ င်အသစ်တစ်ခုကိုကမ်းလှမ်းသည် 50 FreeBets အတွက်ယူရို. တစ်နည်းအားဖြင့်, သငျသညျ၏တန်ဖိုးအလောင်းအစားအခါတိုင်း 50 ယူရို, အရှုံးသမား, Genybet သည်အခမဲ့ဖြစ်သည်.
ထို့အပြင်, မြက်ခင်းပေါ်ဆုကြေးငွေ, သူကအတူတူပဲနိယာမခံစားရတယ်, အဆင့်နှစ်ဆင့်. The 10 ပထမယူရိုကိုကစားသမားထံပို့မည် 10 ရက်နှင့်ပရီမီယံ၏ကျန် (အများဆုံး 40 ယူရို) အဖြစ်မကြာမီအကောင့်အတည်ပြုအဖြစ်.
Genybet သည်မြင်းပြိုင်ပွဲအတွက်အထူးပလက်ဖောင်းဖြစ်ပြီး Turf စက်မှုလုပ်ငန်းအတွက်ရည်ညွှန်းပေါ်တယ်. platform မြင်းပြိုင်ပွဲကိုနှစ်သက်သောပရိသတ်များစွာ၏ရှုထောင့်ကဤကိစ္စတွင် Genybet အားသာချက်များကိုဆွဲဆောင်နိုင်ခဲ့သည်.
ထို့အပြင်, Genybet သည် Turf လုပ်ငန်းတွင်မြှင့်တင်ရေးကမ်းလှမ်းချက်များစွာပေးထားသည်. ပုံမှန်ပလက်ဖောင်းမှကမ်းလှမ်းသောဤဆုကြေးငွေ, ဖြစ်ရပ်၏အရေးပါမှုကိုသို့မဟုတ်ယခုနှစ်ကာလပေါ်မူတည်. ထို့အပြင်, အဖွဲ့ ၀ င်များသည်ကျွမ်းကျင်သူခန့်မှန်းချက်များအရအကြံပြုထားပြီး dashboard မှတဆင့်ယှဉ်ပြိုင်မှုတွင်ပါ ၀ င်နိုင်သည်.
အစစ်အမှန်ပိုက်ဆံအတွက် Genybet အားကစားဆုကြေးငွေထုတ်ယူနိုင်ပုံ?
သင်သည်သင်၏ပထမဆုံးအလောင်းအစားကိုဆုံးရှုံးသည်နှင့်တပြိုင်နက်, Genybet သည်အပိုဆုကြေးကမ်းလှမ်းသည် 50 €. သင့်အားအလုပ်ရှင်၏အားကစားအတွက်ပြန်လည်ပေးဆပ်ရန်ဖိအားပေးခံရသည်. အလောင်းအစားအမျိုးအစားများ, သူဂရုမစိုက်ခဲ့ဘူး. သင်ဇယားကွက်ပေါ်တွင်လောင်းနိုင်သည် / ရိုးရှင်း / ပွဲစဉ်မတိုင်မီသို့မဟုတ်အပြီးပူးတွဲ.
ဆုကြေးငွေမြက်အဖြစ်, ဤငွေသားထည့်ဝင်ခြင်းဖြင့်ရရှိသောအကျိုးကျေးဇူးကိုသင်၏ https အကောင့်သို့အသိအမှတ်ပြုလိမ့်မည်://sport.genybet.fr/. ဒီတော့, သင်ဆန္ဒရှိသည့်အတိုင်းသင်ဖျက်နိုင်သည်.
လက်ခံရရှိသည့်အပိုဆုများအတွင်း၌ကစားရပါမည်သတိပြုပါ3လ. ဤအချိန်အတွင်းသင်မသုံးပါက, သငျသညျကိုဖယ်ရှားလိမ့်မည်. သင်ဤကာလအတွင်းသင်၏အကောင့်ကိုပိတ်လိုက်လျှင်, သငျသညျအပိုဆုဆုံးရှုံးပါလိမ့်မယ်.
ဥပမာ: သင်သည်သင်၏ပထမဆုံးလောင်းကစားကိုဆုံးရှုံးသည် 50 €. ထို့ကြောင့် Genybet သည်သင်၏အခမဲ့လိင်ဆက်ဆံမှုကိုကမ်းလှမ်းသည် 50, သင်တစ် ဦး ရမှတ်အပေါ်ကစား 01:10. ဒီအလောင်းအစားနိုင်လျှင်, ငါတို့ကိုချီးမွမ်းပါတယ် 55 €ငွေသား.
Previous Previous post: ပြင်သစ်ဂီယာ R ကို
Next Next post: PMU ပြင်သစ်